Shina : Gidragidra manerana ny lalamben’i Lhasa · Global Voices teny Malagasy
Shina : Gidragidra manerana ny lalamben’i Lhasa
Voadika ny 27 Marsa 2008 22:23 GMT
Vakio amin'ny teny Português, Español, Français, 日本語, English
Na dia efa andro vitsivitsy lasa aza ity lahatsoratra ity no nivoaka tamin’ny teny anglisy ataoko fa tsy very akory ny hasina mahavaovao azy indrindra amin’ny teny malagasy noho ny fahavitsian’ny vaovao milaza azy amin’ity tenindrazantsika ity. Izay no mbola amoahako azy hatrany. Marihina hatrany fa fandikanteny fotsiny no ataoko fa tsy misy hevitro ao. Raha vao mamaky ny soratry ny mpamaham-bolongana (mpibilaogy) avy any Lhasa fotsiny dia mety ahalalana ny zava-mitranga any ny Zoma (heriny) lasa teo; _Nifanandrify indrindra tamin’ny faha-49n’ny fiokoana notarihin’ny fahefam-pivavahana saingy tsy nahombiazan’ny vahoaka Tibetana hanoherana ny fibodoan’ny Repoblika entim-bahoakan’ny Shina io andro io, ny andro nanaraka kosa ny andro dia nolazana ho andro fiokoan’ny Tibetana manerantany saingy nikatso teo amin’ny sisintany niraisana tamin’i India izany. Havoaka eto avokoa ny vaovao fanampiny rehetra arakaraka ny lahatsoratra hita any amin’ny bolongana any. Indro asehon’i Time China blog antsika ny mpizahatany Eoropeana iray ny soratra, sary, ary lahatsary tany Lhasa vao tamin’ity herinandro ity.
[Fanampiny tamin’ny 16 Marsa ity eto ambany ity]
Mpamaham-bolongana QQ 24K Fitiavana Madio tamin’ny Zoma tolakandro tamin’ny 2:58:
Rotaka teto Lhasa
今天是2008年3月14，白色情人节“也是我到拉萨的第25天。 可今天的拉萨并不太平，外面到处是暴乱份子，以前在内地从来没见过这种场面。 用恐怖也来形容也不为过。
杀人，放火，仍石头““ 外面一片黑暗。 到处冒烟。
武警都出动了“ 大街上面空无一人，店面全部关门了` 马路上都是暴乱份子扔的石头“`
Androany 14 Marsa 2008, Andron’i Valentine (diso ny mpanoratra eto) ho an’ny fotsy hoditra ary faha-25 nahatongavako teto Lhasa. Saingy misy zavatra tsy milamina androany. Feno mpitokona eny rehetra eny, zavatra tsy mbola fahitako mihitsy hatrizay teto amin’ity firenena ity. Na ny teny hoe horohoro aza toa tsy mahalaza azy.
Namono ny olona, nanoko afo teny rehetra teny, torabato re izany… Maintin’ny setroka eny rehetra ivelan’ny trano eny.
Tonga amin-kery ny tafi-bahoaka sady polisi(n’i Shina) …tsy misy olona tazana eny amin’ny lalambe, nikatona avokoa ny toeram-pivarotana rehetra, feno mpirotaka mitora-bato ny arabe (avaho amin’ny lalambe) …
Mpamaham-bolongana QQ ‘Tiako Ny Lanitra Manga’, izay heverina ho mpandrato amin’ny orinasam-pizahantany, Zoma tolakandro tamin’ny 4:01 pm:
Fikorontanana volana marsa eto Lhasa
Re tsahotsaho fa nakatona nanomboka omaly ny tempoly maro,
Eny fa na dia ny ao an-tendrombohitry Everest aza
Raha izany dia inona moa no antony andehanako aty?
Inona ny zavatra hafa haseho ny mpizahatany eto Lhasa izany?
Reko indray androany fa misy tabataba koa ao amin’ny Tempolin’i Jokhang,
Mampitsangam-bolo izany. Mifandimby miantso ny namana,
Tsy hivezivezena any amin’ny manodidina any,
Fa dia inona loatra re no ratsy amin’ny Filaminana sy ny Firaisana aza fady indrindra?
Tsy maintsy ilaina ve ny manakorontana?
Maro ny mpanjifa eto Lhasa izao, saingy nosakanana tsy handehandeha any amin’ny manodidina, inona moa izany no andehanako hitsangatsangana aty?
Efa eto akaiky avokoa izahay rehetra izao,
Manontany ny orinasam-pizahantany hoe fa misy inona,
Dia nolazaina izahay fa eo ampanavaozana ny tempoly (rehetra) amin’izao fotoana izao
Fa dia tena mafy be (tsy azo idirana) mihitsy angaha izao tamboho izao?
Bolongana QQ hafa koa, zoma takariva tamin’ny 6:01:
Toerana lehibe i Lhasa
拉萨暴动…学校禁校…生日泡汤… 市里面打的那叫一个猛!军车一辆一辆的，手榴弹一颗一颗的扔，大昭寺周围被炸开花了，步行街被武警封了，温州商贸诚也被封了，石油公司貌似炸毁了… 长这么大没见过这世面…达lai真ta妈牛b!真希望赶紧把我们学校炸了!我转到人大去我!
Mirotaka i Lhasa…mikatona ny sekoly…nogafiany ny aniverserako…mahery vaika ny ady eto an-tanàna! Manavatsava ny fiaran’ny Tafika, aparitany manodidina ny baomba mananasy, toy ny voatsoka tanteraka ny faritra manodidina an’i Jokhang, nosakanan’ny tafi-bahoaka (Shinoa) ny lalana ho an’ny mpandeha an-tongotra, mikatona ihany koa ny lalan-tsenan’i Wenzhou, toa hoe nipoaka ny fivarotan-tsolika maro… na dia efa antitra aza aho tsy mbola nahare zavatra tahaka izany mihitsy …tena nanao zavatra mihitsy ilay Dalai iny! Manantena aho fa ho avy faingana izy ary handrava ny campus koa ! Hifindra any amin’ny Oniversiten’i Renmin aho ka!
Avy amina bolongana QQ hafa tamin’ny 6:25 tolakandro:
Lhasa, fangejan’ilay toerana masina
Tsy manana ny fahamasinana eritreretiko ho ananany i Lhasa ankehitriny ; ny vahoakan’i Lhasa nohajaina matetika fahiny no indreo lasa loharanom-pahalozana. Tsaroako ho tsy tamana eto amin’ity nosy ity aho; trano fivarotan’akanjo maro no nisy nandoro, nefa tsy misy mahazo alalana handao ny nosy. Nifandona tamin’ny polisy ny lamaista, tsy fantatro aloha raha nisy ny maty. Tsorika aloha fa na dia efa antitra aza aho dia tsy mbola nahita fiara mifono vy sy miaramila maro toy izany. Izay mitranga ankehitriny aloha dia zavatra tsy nokatsahiko mihitsy. Misy ary moa ny miteny fa mamono anay Han Shinoa ry zareo? Mikatona avokoa na bankirompitra ny fivarotana rehetra eto amin’ny nosy sy any Lhasa satria izahay Han no nanokatra azy ireny…
Mba manokam-bola entina hampandrosoana an’i Tibet ihany ny governemanta Shinoa isantaona saingy inona moa ny vokany mandraka ankehitriny? Moa hampandroso an’i Shina kokoa ve izao fanehoan-kalozana eto izao ? Fony aho tonga teto Lhasa voalohany dia nihevitra ity toerana ity ho tsotra aho, toerana mety indrindra ho fampivelarana ny mahaolona sy lapa mora ahazoambola …satria maro dia maro tokoa ny fandraharahana azo tanterahina eto, tahaka ny fitrandrahana ambanin’ny tany efa natao roa taona izao, sady nampatanjaka ny toekaren’i Tibet no nanokatra zotran-dalamby mampitohy an’i Qinghai sy Tibet na dia tsy toy ny vaovao aza no ijerena azy.
Izao indray no ao amin’ny QQ, ‘ Dragona ranomandry ’ tamin’ny 6:26 hariva:
14 Marsa 2008: ny fikomian’ny Laman’i Lhasa
Mizotra no an’ny amin’ny Lapan’i Potala eo amin’ny fihaonan-dalana mankany amin’ny tranombarotra lehiben’i Lhasa izao tolakandro izao ny Tafi-bahoaka, ny polisin’ny fifamoivoizana ary ny polisy mpiandraikitra ny rotaka
Mizotra manatrika ny Lapan’i Potala avokoa ny Fiara mifono vy, ny fiara mitondra fitaovam-piadiana aryny fiara mpamono afo
Nandratra olona ampolony sy nahafaty olona maro ankehitriny ny polisy misahana ny rotaka
Fiarabe mpamono afo iray no may
Fiarana sivily maro no vaky fitaratra, ary fivarotana ampolony no potika
Mihoatra ny zato ny Sikoaney maty
Samy may avokoa ny Tempolin’i Jokhang sy ny Tempolin’i Ramoche!
Niantso ahy ny namana iray hilaza fa feno hipoka avokoa ny hopitaly madinika sy ny hopitaly vaventy rehetra any Lhasa!
(Ny alina teo dia anjatony ny Sikoaney voadaroka teo anoloan’ny Tempolin’i Jokhang ka 13 no maty ary 80 no naratra mafy tokoa)
Mamaham-bolongana QQ hafa ihany koa no nanoratra tamin’ny 6:56 hariva:
Raha mitodika tamin’ny rotaka teto Lhasa
Reko matetika ny vaovaon’ny ady any Iràka, na ny fanafihana mitranga any an-toeran-kafa, ary tamin’izany fotoanaizany aho dia nisento tany anatiko any hoe tsara vintana leitsy ialahy (na indry) fa Shinoa, eto ahay mba tany milamina, tsy misy ady eto no sady tsy misy ahiana ny mety hisian’izany ady izany ! saingy ny rotaka nitranga tany Tibet androany no nampisokatra ny voamasoko kokoa ahatsapako fa misy mihitsy ny karazan’olona tsy tia izany fandriam-pahaleman’i Shina izany ! Manontany tena aho hoe raha nahita iny vaovaon’ny ady nitranga teto Shina iny ny any amin’ny firenen-kafa dia heveriny ho mitovy amin’izay vaovao mitranga any Iràka ve ?
Rehefa mahita ireo dalaï very saina mivory eny amin’ny arabe ary midaroka ny Shinoa Han, rehefa mandrehitra afo handoroana ny fivarotana maro izy ireo, rehefa mitoraka ny « fangaron’i Molotov » amin’ny fiara antsisin’ny arabe izy ireo, teo aho vao tena natahotra, tena tsy azo noeritreretina izany. Ny toerana izay ipetrahanao ihany anie no potehinao e ! Moa tsy mpanaraka an’i Boddha Velona ianareo ? Izay ve no eritreretinareo ho anmpianarin’i Boddha Velona anareo dia ny hoe poteho ny toeerana izay ipetrahanareo ? Mino aho fa ny maro an’isa amin’izy ireo dia tsy nieritreritra izany akory, ary ny maro amin’izy ireo dia voafitaky ny tenin’ny sasany te-hampitsonika an’i Renimalala ! Saingy raha mba noeritreretina kely fotsiny hoe iza moa no nahatonga an’i Tibet ho toeranamandroso tahaka izao ? Iza moa no nampifandray an’i Tibet tamin’izao tontolo izao ? Ary iza no mandefa ireo manam-pahaizana avy amin’ny vondron’asa isankarazany isantaona mankany Shina hampianatra ny zanaky Tibet hanovo fahalalana sy kolontsaina ? ARY iza no mitondra isan-taona ny fandraisana anjaran’ny tanan-dehibe mandroso avy any amin’ny renimalala hanampiana an’i Tibet? Mieritreritra aho fa adinonareo daholo izany rehetra izany ……
Tamin’ny 9:18 alina tao amin’ny Tahalan’i Zoer QQ:
Nioko i Lhasa! Nandamoka ny mpampitony!
14 Marsa, « nijoro » indray ny laman’i Lhasa
Namotika fiara, nandoro, ary nanao zavatra hafa izay mety tsy ho fantatro koa
Na dia miaraka amin’ny fanorenako aza (Tirakitera ?)
tsy mora ho ahy ny mahita ny banga eo amin’ny tafi-bahoaka sy ny rindrin’(olon) ny zandary
Ary tsy tiako ny hotraohin’ny vavantafondro hosihosen’ny fiara mifono vy
Indrisy…Ry Lama, nahoana ianareo no tsy mahay manaja lalàna tahaka ny mpitoka-monina hafa?
mahafantatra avokoa ny rehetra fa tsy manao na inona na inona ianareo
Mpanao ramanenjana fotsiny
Raha mianatra avy amin’ny Anabavy Voaroy momba ny fananana fifantohana hitandremana? Lafo kokoa ve ny vidiny, tsy mieritreritra ve ianao?
Vaovaon’ny alahady faha-16 Marsa:
Tahaka ny Sabotsy, dia mbola voasakana ihany ny YouTube any Shina. Ampaham-baovao kely ihany no tafavoaka an’i Lhasa amin’izao fotoana izao, na izany aza dia mbola misy fampahalalam-baovao madinika misokatra ihany. Phayul.com ohatra dia ahitana lahatsary nalaina tamin’ny finday maneho ireo mpitoka-monina maro nilahatra nandritra ny fanombohan’ny takariva omaly nanodidina ny monasiteran’i Labrang.
Tamin’ny sabotsy ihany koa, ny mpamahambolongana Robert ao amin’ny EconThink MSN Spaces dia namoaka ny fanambarana avy amin’ny mpitondra eo an-toerana miantso ireo « namotika, nandroba, nandoro ary namono » mba hitolo-batana mialohan’ny 17 Marsa, fa izay manao izany dia mety tsy ho saziana fa raha tsy izany kosa dia ho faizina mafy, ary tahaka izany koa no hanjo ireo izay tratra manafina na mampiatrano ny jiolahy. Omena fiarovana kosa ireo izay mitondra ny « jiolahy » any amin’ny manampahefana.